Irreecha bara 2020: ‘Ardaa keenyarratti eebba na dhoowwannaan aare,’ – Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIrreecha bara 2020: ‘Ardaa keenyarratti eebba na dhoowwannaan aare,’ – Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa
Ayyaanonni gurguddoon ji’a Fulbaanaa darbe keessa Finfinnee keessatti kabajaman Masqallii fi Irreechi milkaa’inaan akka raawwatamuuf kanneen gummaachaniif, Dilbata galgala sagantaa galateeffannaa taasifame irratti Aabbootiin Gadaa beekamtii qophaa’eef fudhachuu didanii turan.
(bbcafaanoromoo)–Bulchiinsi Magaala Finfinnee qaamolee ayyaanonni Irreechaa akka milkaa’inaan xumuramuuf gumaachan jedhee waltajjiitti beekamtii kennuuf waame keessaa tokko abbootii Gadaati.
Yeroo maqaan Abbootii Gadaa gara waltajjiitti beekamtii kana kantiibaa itti aantuu magaala Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee irraa akka fudhataniif waamamanis gara waltajjiitti dhufuu diduun maqaan isaanii irra deddeebiin waamamaa ture.
Kunis marsaalee hawaasaa irratti ijoo dubii ta’ee jira.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaan Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoola sababa beekamtii qophaa’eef fudhachuu didan yoo himan “Aradaa keenyarratti eebba na dhoowwatan” jedhu.
Sirna kanarratti maanguddootaa fi abbootiin amantaaakkasumas abbootiin Gadaa saganticha akka eebban saaqaniifis waltajjiitti affeeramanii turan.
Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa waltajjii kanarratti eebbisuuf bahanis sababa carraa dhorkamaniif aariidhaan osoo hin eebbisne waltajjiirraa akka bu’an BBC’tti dubbatan.
“Abbootiin amantaa fi abbootiin Gadaa waltajjiitti affeeramne. Finfinneen handhuurri tuni kan Oromooti. Silaa kan jalqaba eebbisee banuu qabu nu abbaa araddaa kanaati ture. Warri waltajjichaa warruma amantaa affeeranii ana maayikiraafoonii na dhoowwatan.”
“Haalli jiru natti tolu didnaan hin eebbisne ani adda kuteen waltajjicharraa bu’ee deeme. Maalifi yoo jette nuti abbaa biyyaati, abbaa araddaati osoo jennuu eebba nu dhoowwatan. Darbeemmoo nuti Naannoo Amaaraa deemnee isaan dura hin eebbisnu, Tigraayis yoo deemne akkasuma,” jedhan.
‘Dhumarratti dhiifama gaafataniiru…’
Gochi kuni hedduu akka isaan dallansiises himaniiru abbaa Gadaa Goobana Hoolaa.
“Oromoon jaalataadha, hammataadha, moggaafataadha jennee garaa bal’inaan yoo ofitti qabnu, warri kuni garuu waan abbootii amantaa irraas hin eegamne kan isaan na godhan, maayikiraafonii na dhoowwatan,” jedhan.
Turtiidhaan booda Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waliin gara waltajjiitti bahanii beekamtii kana Aadde Adaanech harkaa fudhatanii deebi’an.
“Jalqaba beekamtii sana uummata Oromoo bakka bu’ee fuudhuun waan natti hin tolleefan callise.
Booda bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi hoggantoonni Oromiyaas waan dhiifama gaafataniif wanni dhifama caale hin jiru jedheen ka’een fuudhe” jedhan.
Waltajjii kanarratti muffii Abbootii Gadaa kan hubatan kantiibaa Itti aantuun Magaala Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, sababa waltajjii sanarratti namni baay’ateef, abbootiin Gadaa osoo hin eebbisin hafuu isaanitiin maqaa isaanii fi waltajjii sanaatiin ‘Nu ofkalchaa’ jechuun dhiifama gaafataniiru.
Dogoggora ture hoggantoonni Magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa hubatanii dhiifama waan gaafataniif dhumarratti karaa nagaa fi garaa qulqulluudhaan beekamtii isaaniif kenname fudhatanii galuus Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa himaniiru.
Ragaa Malee Hin Dubbannu
Bulchiinsi Seera dhabeessi Abiy Ahmad gama ergamtoota isaa Magaalaa Finfinneetiin gaaga’ama siyaasaa biyyattii mudate dhoksuudhaaf yaaliiwwan godhaa jiru keessaa inni tokko har’a akkanatti harkaa fashalaaye. Isaan dhugaa Ummataa awwaaluuf deemanis sagantaan Live osoo dabraa jiruu Abbootiin Gadaa mormii isaanii agarsiisan. Abbootiin Gadaa yeroo waamaman didanii jennaan Shimallisifii Alamuu Simeen faan kadhatanii dirqiidhaan fuudhanii gara Madrakii fidan Salphinni kana caale hin jiru ~ Haqni Afaan Qabnaan Funyaaniin dubbata jedhe wallisaan keenya kan Afran Qal’oodhaa
የአብይ አህመድ ህገ ወጥ አስተዳደር በተላላኪዋ የአዲስ አባባ ከንቲባ ጥላዬ ያሚ በኩል ባዘጋጀው የፌሽታ ፕሮግራም ላይ የኦሮሞ አባገዳውች ውርደት እከናነቧቸው:: አባ ገዳዎቹ የኢሬቻን በዓል በሰላም እንዲካሄድ ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በሚል ሙገሳ ከመድረክ ቢጎርፍላቸውም ወደ መድረክ ለመውጣት ፈቃደኛ አለመሆናቸውን በግልፅ አሳይተዋል:: በጉዳዩ የተደናገጡት ሽመልስ አብዲሳና አለሙ ሲሜ አባ ገዳዎቹን ሲለምኑና ሲለማመጡ በደንብ ይታያል:: በርግጥ የህዝብን እውነታ ለመሸፈን የቱንም ያክል ቢተጋም የዚህ ስርዓት ባዶነት በየቀኑ በየራሳቸው ደጃፍ ፍንትው ብሎ እየታየ ነው:: ፕሮግራሙ እንኳንም ላይቭ ሆነ እንጂ ይህንን ከባድ ተቃውሞ ማን ያሳየን ነበር?